Xildhibaannada Golaha Shacabka ee BF Somaliya oo maalinta berri kulmaya (Ogow Ajandaha) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Xildhibaannada Golaha Shacabka ee BF Somaliya oo maalinta berri kulmaya (Ogow Ajandaha)
Xildhibaannada Golaha Shacabka ee BF Somaliya oo maalinta berri kulmaya (Ogow Ajandaha)
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa berri oo Sabti ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 20-ka bisha Jun 2020-ka, kulankoodii caadiga ahaa xarunta golaha shacabka ee Muqdisho ku yeelan doona Xildhibaannada golaha shacabka ee BF Soomaaliya.
Ajendaha kulanka ayaa ah ka doodista xeerka qoondada haweenka oo ka mid ah afarta xeer ee guddiga wadajirka ah loo xil saaray inay soo diyaariyaan.
Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa caawa lagu wargeliyay in berri oo Sabti ah uu jiro kulanka Baarlamaanka, isla markaana ay soo xaadiraan .
Xildhibaanada ayaa lagu waddaa in ay dood adag ka yeeshaan sida loo sugi karo qoondada Haweenka.
Kulanka Golaha shacabka